Sharan aansu — Wed, 10/18/2017 - 16:08
झोडा, चम्फा सुनायौ
तिमीलाई लाटी बनायो
bheshraj71 — Tue, 10/17/2017 - 01:59
हराएको मेरो छोरो
आज अचानक भेटिएको छ
मेरा शुभचिन्तकहरूलाई कसरी भनूँ ?
उसको भौतिक अस्तित्व मेटिएको छ
उसको गर्धन रेटिएको छ !
HomSuvedi — Tue, 10/17/2017 - 01:57
जहाँ स्वर्गीय आनन्द जहाँ दृश्य अलौकिक
जहाँ छ सभ्यता बेग्लै जहाँको रीति मौलिक
त्यस्तो जो स्थानमा मैले आफूलाई पुर्याइनँ
सधैं भोक सधैं तिर्खा हसुरेरै अघाइनँ ।।
editor — Tue, 10/17/2017 - 01:54
शाश्वत उज्यालोको खोजमा छन् मेरा जाग्रत आँखाहरू । शाश्वत सत्यको प्यासमा तड्पिएको छ मेरो मानस जगत् । आँखा छन् र म उज्यालोको प्यासी बनिरहेको छु । आँखा छन् र म अँध्यारो अवलोकन गरिरहेछु । आँखा र उज्यालो बीचको सम्बन्धलाई पानी तिर्खाबीचको सम्बन्धको बीचमा, भोजन र भोकको सम्बन्धको रूपमा गाँसेर हेर्न सक्दछु । प्रकृतिमा पानी छ र तिर्खा छ, भोजन छ र भोक छ । त्यस्तै मेरा जाग्रतआँखा छन् र उज्यालो दुनियाँप्रति प्यास छ ।
editor — Tue, 10/17/2017 - 01:47
माइत बसाइँ पछि
भेट्ने तिब्र चाहनामा
ऊ आई हुईकिँदै
एक सासमा बेगले
आँगन हुँदै पिँडी
म शोकाकुल भएँ
देश दुख्छ मलाई
राजविराज : उहिल्यै र अहिले
दिनरात पैसा झार्ने बाटोमात्र हेर्छ पुलिस
साता बित्यो अझै पनि
लुकायौ रूप किन
अन्नपूर्ण र मनास्लुको संगम
एउटा अनुदार अनुभूति
कहिले रम्छु फाँटतिरै
बुद्ध मात्र पर्याप्त रहेनछन्
तीन मुक्तक (भन्दिन भन्दै थिएँ)
तिम्रै निम्ति मर्छु भन्ने